Noho ny delestazy lavereny: raikitra ny sakoroka…, may ny biraon’ny Jirama | NewsMada
Par Taratra sur 21/03/2019
Nipoaka ny sarom-bilany. Vokatry ny delestazy lavareny tsy misy fiafarany, nirehitra ny hatezeran’ny vahoakan’Antalaha, omaly tolakandro. Raikitra ny fihetsiketsehana, tora-bato. Niafara tamin’ny fandorana ny biraon’ny Jirama ny sakoroka…
Raikitra ny gidragidra tao Antalaha, omaly noho ny delestazy lavereny miseholany any an-toerana. Vokany, nodoran’ny fokonolona ny birao misy ny Jirama ao an-toerana. Kila hotohoton’ny afo ny trano sy ny fitaovana rehetra tao amin’ny orinasa Jirama ao Antalaha. Lasa lavenona tsy nisy noraisina intsony ny antontan-taratasy rehetra tao an-trano. Raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, tapaka efa nandritra ny andro maromaro ny jiro tany Antalaha. Nanao fihetsiketsehana ny mponina manoloana izany sady fanairana rahateo koa ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Jirama, saingy tsy nisy valiny izany ka niafara tamin’ny fandoroana ny biraon’ny Jirama izany. Nijoalajoala ny afo, tsy nifankahitana ny torabato nataon’ireo andian’olona marobe manoloana ny biraon’ny Jirama. Tsy voasakana intsony ireo fokonolona tao Antalaha. Niparitaka eran’ny tokotany ny antontan-taratasy rehetra toy ny faktiora tao amin’ny birao.
Tsy voafehy mihitsy ny delestazy…
Iray amin’ireo faritr’i Sava ianjadian’ny delestazy lavareny ny distrikan’Antalaha. Voalaza fa vokatry ny tsy fampiasan-tsoliky ny Jirama hatrany no mahatonga ny delestazy. Manoloana izany. “Empaka (fomba fiteny Antalaha midika hoe leo)” delestazy ny mponina ka tsy nahazaka intsony. Tsy voafehy ireo mpanao fihetsiketsehana satria na ireo mpitandro filaminana niezaka nandamina ireo olona marobe aza tsy naharesy tosika azy ireo. Tsy ny any Antalaha ihany fa na eto an-drenivohitra aza tena mampijaly ny olona maro mihitsy ity resaka delestazy lavereny ity. Manginy fotsiny ny fahatapahan-drano isan’andro lava izao, raha tsy hitanisa fotsiny eto Antananarivo sy ny manodidina iny. Amin’ny misasakalina vao mandeha ny rano ary ao anatin’ny roa andro aza vao mandeha raha handeha, araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo mponina sasany. Vao haingana no nisy ilay fihetsiketsehana nataon’ny mponina teny Ambondrona noho ity resaka fahatapahan-drano ity hatrany.